मीनासँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि मनोज गजुरेलले लेखे भावुक स्टाटस ! « News24 : Premium News Channel
मीनासँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि मनोज गजुरेलले लेखे भावुक स्टाटस !
मनोज गजुरेलको स्वीकारोक्ति : हामी दुबै गलत होइनौं तर फरक रहेछौं
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनहरुमा अनेकथरि समाचारहरु आए र अनेकौं अडकलबाजी गरिए ।
तिनै समाचार र अडकलबाजीहरुलाई पुष्टि गर्दै मनोज गजुरेल स्वयंले आफ्नो पारिवारिक अवस्थाबारे स्पष्ट पारेका छन् । सधैंभरि सबैलाई हँसाउने र व्यंग्य कस्ने चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलको जीवनमा एउटा सम्वेदनशील घडी आएको छ ।
कलाकार गजुरेलले लामो स्टाटस लेखेर भनेका छन्, “हामी दुबै गलत होइनौं तर फरक रहेछौं । त्यसै कारणले होला, दुई दशकभन्दा लामो सम्वन्ध जोगिएन ।”
उनले एउटा सामाजिक ब्यक्तिबाट यस्तो दुःखद घटना जानकारी गराउनु आफैंमा सकारात्मक बिषय होइन भन्दै लेखेका छन्, “जीवनका धेरै पाटाहरुमध्ये पारिवारिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो सफल पार्न नसकेकोमा तपाईंहरुसमक्ष क्षमाप्रार्थी छु ।”
मनोज गजुरेलले लेखेको मार्मिक स्टाटसको पूरा पाठ
श्रद्धेय शुभेच्छुक महानुभावहरू,
मेरो पारिवारिक सम्वन्धका बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार, टिका टिप्पणी, जिज्ञासा र समाचारप्रति मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ । हामी (मीना ढकाल र मनोज गजुरेल) बिगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका हौं ।
हामीबाट एक छोरा र एक छोरी (मिरोज र मेमोरी) को जायजन्म भएको छ । हामी अलग परिवेश र फरक जीवनशैलीबाट आएको हुनाले होला, हाम्रो वैवाहिक जीवनको करिब प्रारम्भिक चरणदेखि नै सामान्य मतभेद हुँदै आएको थियो ।
हामीले हाम्रा सन्ततिको भविष्यका लागि पनि सकेसम्म मिलेर अगाडि बढ्न प्रयत्न गरेका थियौं तर यसलाई जीवन्त बनाउन सकेनौं । त्यसैले पारिवारिक सहमतिका आधारमा हामीले कानुनीरुपमै छुट्टिने निर्णय गर्यौं । यस क्रममा छोरी आमाको र छोरो बाबुको अविभावकत्वमा रहनेगरी सम्पत्तिलाई दुवै पक्षका परिवारको रोहबरमा चार भाग लगाई बाँडफाँड गरेका छौं ।
एउटा सामाजिक ब्यक्तिबाट यस्तो दुखद घटना जानकारी गराउनु आफैंमा सकारात्मक बिषय होइन । जीवनका धेरै पाटाहरुमध्ये पारिवारिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो सफल पार्न नसकेकोमा तपाईंहरुसमक्ष क्षमाप्रार्थी छु । हामी दुबै गलत होइनौं तर फरक रहेछौं । त्यसै कारणले होला, दुई दशकभन्दा लामो सम्वन्ध जोगिएन ।
यो संवदनशील घडीमा हाम्रा दर्शक, श्रोता, पाठक, आफन्त, परिवारजन एवं सम्पूर्ण शुभ चिन्तकहरुमा आग्रह गर्न चाहान्छु कि म, मीनाजी, हामी दुबैका परिवारजन र हाम्रा सन्ततिको जीवनमा तपाईंहरुबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
अन्त्यमा, विवाहपूर्वको प्रेम, वैवाहिक जीवनको अनुभव र सन्तान सुखको मिठो अनुभूतिका लागि मीनाजीलाइ म अन्तर हृदयबाट धन्यवादसहित सफलताको कामना ब्यक्त गर्दछु । सबैको मंगल होस् ।